May 1, 2011, China wayeka ukuvimbela Foam tableware - China Longkou Fushi Ukupakisha
Ukuze izakhamuzi abazalwa ngaphambi kwawo-1990, i-tableware Foam ukujwayele, kodwa irayisi izitsha bangamathe nolimi. Nokho, kumele into emuva. Ngenxa non-degradability yayo, semali "Ukungcoliswa elimhlophe" uvuse ukukhathazeka wonke umphakathi. It uvinjelwe kusukela ukusetshenziswa e ojantshi, lokuthumela imikhumbi umgibeli nemikhumbi izivakashi kusukela ekuqaleni. Kusukela ngaleso sikhathi, plastic foam tableware sekuqediwe lonke iminyaka 14.
NgoFebhuwari 26 kulo nyaka, iNational Development and Reform Commission elikhiphe Cha 21 Order, kancane kabusha "Industrial Sakhiwo Ukulungiswa Isiqondiso Catalogue (2011)", lapho alahlwayo plastic foam tableware lisusiwe kusuka ikhathalogi imikhiqizo iqedwe. Lokhu kusho ukuthi ngemva Meyi 1 kulo nyaka, foamed kwasemini ibhokisi kuyoba ngokusemthethweni "waphakamisa" waphindela emakethe.
Ngokuphathelene izizathu oqeda ukuvinjelwa, le NDRC akazange enze impendulo esisemthethweni. Umuntu ophethe ukukhiqizwa alahlwayo Foam tableware uye wasikisela ukuthi ukusetshenziswa izinto zokusetshenziswa for foamed kwasemini amabhokisi kuyinto 1/4 kwalowo non-foamed kwasemini amabhokisi kuphela. Ukuvumela ekukhiqizeni nokudayiswa foamed kwasemini amabhokisi kungehlisa energy ukusetshenziswa, okuyinto kungenzeka Esinye sezizathu for the wavulwa. Kanti nezinga abantu lingaphezulu kakhulu kunangaphambili, futhi ukulahla manje ziyancipha kakhulu. izitsha Foamed nazo kabusha.
1. Ingabe tableware foamed ingozi emzimbeni womuntu?
Dong Jinshi, uNobhala-Jikelele we-Food International Impahla Association, wembula ukuthi yi-Food Safety Institute Chinese Centre for Disease Control and Prevention osingathe ubuthi ukuhlolwa ngokuhambisana namazinga afanele kazwelonke. Ukusetshenziswa tableware foamed ngendlela ephilayo imvelo evamile iphephile.
2. Ingabe yesivini tableware ukukhiqiza izakhi enobuthi 65 ° C?
Cao Yu, okuphambene usihlalo esiphethe China Plastics Association, wathi inkinga lokukhululwa styrene monomer e alahlwayo plastic foam tableware at 65 ° C noma ngenhla okungenasisekelo, ngoba izinga lokushisa depolymerization idinga ukuba njengoba eliphezulu 280 ° C noma ngaphezulu. Amazinga futhi idinga 110 ° C kuya 120 ° C. China Plastics Association wabuye wathi abantu alahlwayo Foam kwasemini ibhokisi iwumkhiqizo oluhlaza.
Ikhasimende lethu elikhulu kakhulu lasekhaya eNantong City, esifundazweni saseJiangsu, esiseduzane nebhasi laseShanghai 2.5h. Leli khasimende lithenge amasethi amathathu wokuzenzakalela ngokuphelele we-robot arm imodeli yokwakha ukusika kanye nomshini wokufaka on-line eminyakeni emihlanu edlule. Samukela amakhasimende ukuthi awavakashele ukuze abone ukusebenza kwemboni. Futhi uxhumane nathi kusengaphambili, sizohlela uhambo. I-imeyili: fushi04@foamextruder.cn.
isikhathi Thumela: Jul-16-2018